सिरियाको नरसंहार : नरोकिए रूसमा विश्वकप खेल होला ?
सिरिया गृहयुध्दको चपेटामा परेको सात वर्ष भयो ; बिहीवार (१५ मार्च) मा आठौं वर्ष प्रवेश ग-यो । समाचार माध्यमहरूमा राष्ट्रपति बसर अल-असदका सैनिकहरूको क्रूर, हिंसात्मक र अमानवीय आक्रमणमा परेका वयस्क महिला, बाल-बालिका र वयस्क पुरुषहरूको हृदयविदारक सचित्र विवरण आउन छोडेका छैनन् ।
यसको निकास कसरी र कहिले हुने हो यसै भन्न कठिन छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय माध्यममा आएका आँकडा अनुसार, सिरियामा ४ लाख ६५ हजार मानिसको ज्यान गैसकेको छ; दशलाखभन्दा बढी घाइते छन् र एक करोड २० लाख घरवारविहीन भैसके जसमध्ये झण्डै ५५ लाख शरणार्थी भएर देशबाहिर जान बाध्य भएका छन् । रुसको आड पाएको असद आफ्नै देशका गैरसैनिक नागरिकलाई छप्काउने अपराधमा संलग्न रहेको छ । इरान, इराक र लेबनान (का हेजबुल्ला समूह) आफ्नो समर्थनमा रहेको हुँदा असदको संहारकारी मानसकिताले प्रोत्साहन पाइरहेको छ ।
हो, टर्की कतार र साउदी अरेबिया असदको विरोधमा छन् तर असदका विरोधीहरू प्रभावकारी प्रत्याक्रमणमा लाग्न सकेका छैनन् । सन् २०१४ यता अमेरिकाले असदको विरुध्द विद्रोह गर्नेहरूलाई केही सहायता उपलब्ध गराए तापनि त्यो सशक्त प्रतिकारको लागि पर्याप्त रहेको छैन । तत्कालीन राष्ट्रपति बाराक ओबामाले सिरियामा संलग्नता बढाउन चाहेनन् किनभने उनको देश इराक र अफगानिस्तानमा अल्झेको स्थिति थियो । अहिलेका राष्ट्रपति ट्रम्पको प्रशासन सिरियाबारे उदासीन देखिएको छ । यता, भ्लादिमिर पुटिनको रुस भने असदको पक्षमा सैनिक शक्ति सहित खुलेयाम लागेको छ । सिरियाका नागरिकहरू मार्ने काममा रुसको सोझो संलग्नता देखिनु दु:खलाग्दो स्थिति हो ।
विश्वलाई हिंसा र द्वन्द्वबाट जोगाउने बडापत्र (चार्टर) बोकेको संयुक्त राष्ट्रसंघ सिरियाको लागि के गर्दैछ ? यसको शक्तिशाली मानिने अङ्ग ‘सुरक्षा परिषद्‌’ किन असदलाई आफ्नै निर्दोष जनता मार्ने कामबाट रोक्न सकिरहेको छैन ? विडम्बना के छ भने परिषद्का पाँच स्थायी सदस्यमध्ये अमेरिका र रुस यस लडाञीमा परोक्ष रूपमा आफैं संलग्न छन्; चीन रूसलाई समर्थन गर्दछ; बेलायत र फ्रान्स सशक्त रूपमा अघिसर्न चाहँदैनन् । यसबीच पहिलेका महासचिव कोफी आननले विशेष दूत भएर काम गरेका हुन् तर उनको पहलले निकास दिएन र हाल अर्का दूत क्रियाशील छन् । मध्य-फागुन (२४ फेब्रुअरी) राष्ट्रसंघबाट पारित एक प्रस्तावले ३० दिनको युध्दविरामको आग्रह गरेको छ तर त्यसको पालना सरोकारवाला पक्षले राम्रोसित गरेका छैनन् ।
पुटिन नेतृत्वको रुसले असदलाई जसरी भए पनि टिकाइराख्ने यतिञ्जेलको मानसिकतालाई त्याग्न सकेमा शान्तिवार्ताका अवरूध्द सिलसिला खुल्ने छन् र लडाञीले छिन्नभिन्न गराएको सिरियाको समाज फेरि एकजुट हुने वातावरण निर्माण हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ । प्रतिशोध र होडबाजीको क्रमलाई अन्त्य गर्न पुन: निर्वाचित पुटिन लागे भने चालू रहेको द्वन्द्व समाप्त हुनेछ । आखिर पुटिनले पनि नयाँ कार्यकालको लागि नयाँ कार्यसूची तय गर्नुपर्ने बेला आएको छ । साथै, आउँदो असार (मध्य-जून) मा हुने विश्वकप फूटबलको आयोजक देशको हैसियतले सम्भाव्य बहिष्कारको सिलसिला आइपर्ने कुरालाई पनि उपेक्षा गर्न सक्दैन ।
चैत ५, २०७४ मा प्रकाशित